Madaxweeyne Obama oo Timaha u soo jartay qaabka Xaaskiisa kana Qosliyay marti sharaf badan (Daawo Muuqaal+Warbixin) – idalenews.com
Madaxweeynaha dalka Mareeykanka Mr.Barack Hussein Obama ayaa mar kasta waxa uu la soo shir tagaa arimo badan oo uu kaga qoslin karo Shacab weeynaha dalka Mareeykanka kuwaas oo intooda badan u arko Madaxweeyne Qosol badan oo aanan ka xishoon arimaha u qaaska ah.
Hoos Ka Daawo Muuqaalka uu yeeshay Madaxweynaha
[vsw id=”k2qZIhNkE8Q” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]
Xaflad ka dhacay Aqalka Cad ee looga taliyo dalka Mareeykanka ee White House-ka ayuu madaxweeyne Obama waxa uu tusay marti Sharaftii iyo dadkii Xafladaas ka soo qeeyb galay Jarmo cusub kaas oo sheegay inuu dhanka Timaha isku ekeeysiiyay qaabka ay Timaha u jarato Xaaskiisa Michelle Obama.
Dadkii Xafladaan ka soo qeeyb galay ayaa mar quraa Qosol la dhacay mar alaale iyo markii ay arkeen Madaxweeyne Obama qaabka uu Timaha u soo jartay.
Madaxweeynaha dalka Mareeykanka Mr.Barack Hussein Obama ayaa waxaa loo qiray inuu yahay Madaxweeyne qabsaday ama degay dhegaha Shacabka dalka Mareeykanka kaas oo mar kasta u keena wax ka yaabiya ama ka qosliya.
(DAAWO SAWIRADDA) Baarlamaanka Venezuela oo gacanta isla galay